कुनै पनि व्यवसायमा असफलता व्यहोर्नु परेको छैन—प्रदीपजंग पाण्डे , पूर्वअध्यक्ष ,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ – Maitri News
कुनै पनि व्यवसायमा असफलता व्यहोर्नु परेको छैन—प्रदीपजंग पाण्डे , पूर्वअध्यक्ष ,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
maitrinews October 30, 2017
नेपालका चर्चित र सफल उद्योगी व्यवसायी मध्येकाएक हुन् प्रदीपजंग पाण्डे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पर्व अध्यक्ष एवं लोमस फर्मास्युटिकल्स प्रा. लि.का प्रवन्ध निर्देशक पाण्डे हाल औषधी, सिमेण्ट, क्लिङकर, वैंक, फाइनान्स लगायतका दर्जन भन्दा बढी उद्योग व्यवसायमा प्रत्येक्ष आवद्ध छन् । आफूले हात हालेपछि सफलता प्राप्त गरेरै छाड्ने पाण्डे कुनै पनि काममा दत्रचित्त भएर लाग्दा त्यो सफलता प्राप्त हुने वताउँदछन् । मिलनसार स्वभावका धनी पाण्डेसँग मुलुकको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र, लगानीको वातवारण र श्रम सम्वन्ध लगायतका बिषयमा आधारित गरिएको कुराकानीको संक्षेप ।
महासंघको नेतृत्व पश्चात हाल के मा ब्यस्त रहनु भएको छ ?
म एउटा ब्यवसायी हुँ । कुनै संस्थामा नेतृत्वमा हुँदा त्यहाँ हेर्ने हो । अन्य समयमा त आफ्नो व्यवसायमा ध्यान दिनु प¥यो नि ।
लोमस पर्मास्युटिकल्स कम्पनि ३३ बर्षमा हिँडिरहेको छ । यो मुलुककै पुरानो उद्योग हो । यसले आम मानिसको स्वास्यसँग सम्वन्ध राख्ने औषधी जस्तो महत्वपूर्ण र सम्वेदनशील वस्तु उत्पादनगर्ने हुनालेबढी यसैमा ध्यान दिनु पर्दछ । विगतमा मैले तीन चारबर्ष यसमा त्यति राम्रोसँग ध्यान दिन सकेको थिएन । अहिले समयदिएर काम गरिरहेको छु । यसबाहेक अन्य उद्योग खोल्नेक्रममापनि मेरो संलग्नता छ । आफ्नै पेशा ब्यवसायमा समय खर्च भैरहेको छ ।
ब्यवसायको ब्यस्तताले सामाजिक क्षेत्रमा लाग्न छाड्नु भएको हो ?
आफूले गर्ने सामजिक कार्य र आफूले गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई मैले समय दिँदै आएको छु । यसकालागि मैले आवश्यक समय मिलाएको छु । वाँकी समय आफ्नो काममा दिएको हो ।
एउटा व्यसायीको हेराइमा यतिवेला मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो छ ?
हरेक क्षेत्रमा अहिले हस हुँदै आइरहेको छ । राजनीतिक , सामाजिक, रितिरिवाज र साँस्कृति जस्ता सवै क्षेत्रमा क्रमिकहरुपमा हस आइरहेको छ । शेयर बजार र अन्य ब्यापारिक षेत्रमापनि यस्तै छ । यसले गर्दा मुलुकको उत्पादकत्व घटेको छ । जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदरमा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुलेपनि यसबर्ष सरकराले लिएको लक्ष्य अनुसार वृद्धिदर हासिल नहुने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् ।
यस्तो अवस्था कसरी आयो ?
धेरैले यसमा राजनीतिलाई कारण दिन्छन् । तर त्यो मात्र होइन । राजनीति र आर्थिक क्षेत्रको आ आफ्नो वाटो छ । आर्थिक क्षेत्रको ८०÷८५ प्रतिशत निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । अहिले निजी क्षेत्रपनि कमजोर हुँदै गएकोले यस्तो भएको हो । हाम्रो उत्पादनको लागत बढेकोछ । नयाँ उद्योग धेरै खुल्न सकेका छैेनन् । विदेशवाट सामान ल्याउँदा वाटोमा अनावश्यकरुपमा समय बढी लाग्ने गर्दछ । दिल्लिवाट समान ल्याउँदा भैरहवामा १०÷१२ दिन रोकिन्छ । यसले ब्यापार प्रवद्र्धनमा अशर गर्दछ र तर हामीले यस्ता समस्याा समाधानगर्न सकेका छैनौं । यहाँ कुरा धेरै हुन्छ तर काम कम हुने गर्दछ । यसले गर्दा हरे क्षेत्रमा अहिले हस आइरहेको । बैंकको ब्याज बढेको छ । उद्योगको लगानी बढेको छ ।
नयाँ श्रम ऐन आएको छ । त्यसको कार्यान्वयन तर्फ ध्यान दिन पर्दछ । उत्पादन बढाउने, लागत घटाउने र लगानिको वातावरण कसरी वनाउने भन्ने तर्फ अव सोच विस्तार गर्नुपर्ने खाँचो छ । लगानीगर्न मानिसहरु हिच्किचाउने कुरा हुँनु हुँदैन । यद्यपी अहिले एकाध उद्योगहरु बढ्ने, रोजगारिमा सामन्य सुधार देखिने जस्ता कार्य नभएका होइनन । तर त्यतिले पुग्दैन । त्यसकालागि केही गर्न सक्नु पर्दछ ।
यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो छ ?
मुलुकको उद्योग ब्यवसाय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता ठूलो छ । आर्थिक क्षेत्रमा झण्डै ८० देखि ८५ प्रतिशत क्षेत्र निजी क्षेत्रले ओगट्छ । तर यतिठूलो सञ्जाल र सहभागिता भएरपनि जुनरुपमा उसले क्षमता देखाउनुपर्ने हो त्यो भने हुन सकेको छैन । यसमा धेरै खालमा समस्या छन् ।
ब्यवसायीको आफ्नै लगानीले त होइन ?
यो आम नागरिकले महशुस गर्ने कुरा हो । म आफ्नो संस्थाकोबारोमा यो कुरा धेरै गर्न चाहन्न । मैले सहयोगपनि पाएको छु । यसमा धेरै कुराहरु जोडिएका छन् ।
महासंघले गर्नुपर्ने के हो ?
राष्टको सरकारपछिको दोस्रो ठूलो नेटवर्क भएको सञ्चाल भएको संस्थाको हो । यसल मुलुकको आथिृक तथा समाजिक विकासमा सहयोग पु¥याउन सक्दछ । यसर्थ मुलुकको आथिृक सवलिकरणकालागि महासंघले लिने नीति, उसले खेल्ने भूमिका, उसले गर्ने अनुषन्धान तथा कार्यक्रम आदिले धेरै प्रभाव र्पार्दछ ।
त्यस अनुसार काम गर्न सकेको छ त ?
यो मैले भन्ने होइन । वाहिरवाट नै बिश्लेषण गर्ने कुरा हो ।
सुधारका लागि के गर्नुपर्ला ?
साँच्चि भन्ने हो भने हामीले सवै क्षेत्रमा सतहीकुरा मात्रै गर्दै आइरहेका छौं । हामी सधैं संभावना छ मात्र भन्छौं । धेरै साधान र स्रोत छ भन्छौं । तर खोइ त त्यसको सदुपयोग गरेको ?
यसर्थ वोलेर होइन गरेर देखाउन सक्नु पर्दछ । खोलामा पानी भएर घरमा वत्ति वल्छ र ? स्रोत छ भनेर चुपलागेर वस्ने होइन । विद्युत निकाल्ने हो । पर्र्यटनको संभावना छ भन्ने मात्र होइन धेरै पर्यटक ल्याएर घुमाउने हो । यी उदाहरण मात्र हुन् । जे संभावना छ त्यसको भरपुर सदुपयोग तत्काल गर्न स्कनु पर्दछ । कुरेर वस्ने र छ मात्रै भने हुँदैन । उ गरे के नहुँँदो रहेछ र ? कुलमानले लोडसेडिङ हटाएर देखाए । एबर्षमा यो क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन ल्याउ । त्यसअघि किन भएन ? उनले चाहना गरे, भयो । जुक सुकै क्षेत्रपनि यही हो । कहिले के चाहिन्छ त्यो उपलब्ध गराउने, के संभावना छ त्यसको उपोयग गर्ने, कहााकसले के गर्नुपनेृ हो त्यही गरिहालने जस्तो कार्य हमील्े गर्नुपर्दछ । यो ममोडलमा हिँड्ने हो भने काम हुन्छ । छ÷छ मात्रै भन्ने तर केही नगर्ने हो भने सधैं यस्तै हो । आजकोकामा आजै र भोलिकोभोलि नै गर्ने हो । कामगर्न कठीन छैन ।
श्रम ऐनको यहाँले आफ्नै पालामा मस्यौदा कोन शुरु गर्नुभएको थियो । अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ । कसरी हेर्नुभएको छ ?
हो । मेरो पालामा मैले नै यसको मस्यौदा वनाएको हो । यसले सवैलाई वीन वीन अवस्थामा पु¥याएको छ । कर्मचारीले सुविधा पाउँछ । रोजगारदाताले आफ्नो आवश्यकता र चाहना अनुसार कामदार चयनगर्न पाउने ब्यवस्थाा त्यसमा छ । उद्योग र मजदुर दुवैको सम्मान गरेको छ । यसले मजदुरलाई पनि एउटा पार्टनरको रुपमा हेरेको छ । कसैलाई पनि अनावश्यक दवाव पर्ने बाध्यता हटाउको छ । आवश्यक विकल्प सहित हायर एण्ड पायरको ब्यवथा गरेको छ । यसले गर्दा कर्मचारीलाई प्रतिवद्ध भएर कमगर्न प्रेरित गरेको छ । रोजगारदाताले आवश्यक परे निर्णय परिवर्तनगर्न सक्ने अवस्था आएको छ । यसले दुवै पक्षलाई फाइदा पु¥याएको छ ।
प्रसङग वदलौं । बजारमा यतिधेरै औषधी उद्योग छन् । किन लोमस फर्मास्युटिकल्साई रोज्ने ?
हामीले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको उच्चस्तरिय र विश्वसनिय किसिमका औषधीहरु उतपदन गर्दै आएरहेका छौं । ३३ बर्षदेखिको हाम्रो अनुभव छ । हामीले अत्यन्तै संवेदनशिल औषधीहरु उत्पदन गर्दै आइरहेका छौं । यस्ता कुराहरुनिकै संवेदनशील हुन्छन । यस्ता कुराहरमा वारम्वार आधुनिकपनको आवश्यकता छ । एकपटक सिस्टम मिलाएपछि पनि चुपलागेर वस्न मिल्दैन । वारम्वार यसलाई परिमार्जन गरिरहनु पर्दछ । यसरी कामगर्दा मात्रै आम मानिसको मन जिल्न सक्ने हो । अहिले लोमसका धेरै औषधहिरु नेपालमा प्रयोग भइरहेका छन् । नेपाल वाहिर पनि केही औषधीहरु निर्यात हुन्छ । यसलेगर्दा नेपाली औषधीप्रतिको बिश्वसनियता बढ्दै गएको छ ।
नेपाली उद्योगका औषधी कति प्रतिशत खपत हुन्छ ?
यो ट्याक्कै यति नै भन्न त कठीन हुन्छ । तैपनि हाम्रो अनुमानमा अहले करिव ४५ प्रतिशत नेपाली औषधी यहाँ खपत हुन्छ ।
औषधीमा नेपाल कहिलेसम्म आत्मनिर्भर होला ?
त्यसलाई समय लाग्न सक्छ । किनकी औषधी धेरै थरिका हुन्छन् । कुनै न कुनै ल्याउन आवश्यक पर्दछ ।
तपाइँले पहिला उद्योग स्थापना गर्नुभयो, त्यसपछि बैंक र बीमा तिर लाग्नु भयो । अहलिे अरु अरु क्षेत्रमापनि लाग्नु भएको छ । किन ?
सबै क्षेत्रको आ–आफ्नै महत्व छ । श्रम बढी प्रयोग हुने उद्योगमा विगतमा श्रम समस्या देखियो, तर व्यवस्थापन पनि हुदै गएको छ । यस्ता उद्योगमा पछिल्लो चरणमा उर्जाको समस्या अत्याधिक भयो । बजार र पुर्वाधारको पनि समस्या देखियो । यी समस्याका कारण लगानीकर्ता सेवाक्षेत्र तिर लागे । बैंकिङ र बीमा पनि एउटा हाउस हो । वित्तीय क्षेत्रमा पनि पहुँच हुनुपर्छ भनेर हामी त्यसतर्फ लागेका हौं । उद्योगमा समस्या धेरै देखर बैंक र बीमामा गएको होइन । मैले आईटीमा पनि लगानी गरेको छु । आईटीमा किन भनेर पनि प्रश्न उठ्ला । संभावना भएको क्षेत्रको पहिचान गर्नु सफल व्यवसायिको कर्तव्य पनि हो । यही कारण मैले लगानी विविधिकरण गरेको हुँ । तर मेरो मुख्य आधार भनेको उद्योग नै हो । पहिला सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गरे, त्यसपछि बैंक र बीमामा गए, फेरी विराटनगरमा अर्को सीमेन्ट उद्योग स्थापना गरे । बैंक र बीमामा गएपछि फेरी फर्किए नि त । बजारमा अरुलाई पनि बाँच्ने आधार दिइराख्नु पर्छ भन्ने मेरो सोच हो, सबै आफैले क्याप्चर गरौं भन्ने सोच राख्नु हुदैन । म पुर्वमा लगानी गरिरहेको छु, पश्चिममा गएको छैन । त्यहाँ अरुले लगानी गर्नुपर्छ ।
थप नयाँ उद्योग स्थापना गर्दैहुनुहुन्छ ?
तत्कालका लागि नयाँ उद्योगको योजना छैन । उद्योग स्थापना गरेपछि हामीले यो उद्योग चलायौं भन्छौं, पहिले नै हल्ला गर्दैनौं ।
तर अहिले त यति अर्ब लगानी गरेर यस्तो उद्योग सञ्चालन गर्दैछौं भनेर घोषणा गर्न थालिएको छ । यसले त वातावरण बनेको संकेत पनि गर्दैन र ?
यो राम्रो कुरा हो । म लगानी गर्दै छु भनेर सकारात्मक संकेत दिनु राम्रो हो । यस्तो घोषणालाई पूर्णकार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । घोषणा गर्नेहरुलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आफ्नो घोषणा अनुसार परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुस । यसले बजारमा राम्रो सन्देश जान्छ र अरुलाई हौसला पनि मिल्छ । हामीले के सोच्नु पर्यो भने सकेसम्म बढी रोजगारी सिर्जना गरौं, सकेसम्म बढी राज्यलाई कर तिरौं, औद्योगिक वातावरण बनाऔं र सामाजिक संस्कार बदलौं । यो राम्रो हो ।
Previous Previous post: ‘कम्युनिस्टको नेतृत्वमा परिवर्तन र उपलब्धि, कम्युनिस्टकै नेतृत्वमा सामाजिक न्याय र समृद्धि’
Next Next post: काँग्रेसको महत्वाकांक्षी घोषणापत्र : एमाले र माओवादीप्रति आक्रामक(चुनावी घोषणापत्रसहित)